Ururka Horumarinta Madiina Oo Kulan Kuyeeshay Oslo 08 10 2016 +Sawirro +Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ururka Horumarinta Madiina Oo Kulan Kuyeeshay Oslo 08 10 2016 +Sawirro +Video
Waxaa Maalinti shalay kulan Balaran yeeshay Ururka Horumarinta Degmada Madiina kulankaas oo ahaa mid lagu soobandhigayay wax qabadka ururka iyo Xil wareejin ay samayanayeen Maamulkii Horay usooshaqeyay.
Kulankaas ayaa waxaa kasoo qayb galay Jaaliyada Norway Gaar aha Reer Madiino iyo Marti Sharaf kale oo lagu socasuumay.
Ugu horayn waxaa halkaas kahadlay qaar kamid ah Gudigii Horay usoo shaqeeyay oo kawar bixiyay waxqabadkooda Mudadii Lixda Bilood oo ay sooshaqeeyeen iyo waxa ladoonayo in lasii qabto Bilaha soosocda.
Gugiga ayaa sheegay inay Degmada Madiina U iibiyeen Ambulas Qalabkiisa Uwada dhan yahay kana shaqeeya hada magalada islamarkaasne leh 4 Qof oo Habeen iyo Maaliba kashaqaysa oo dadka ugu tagta halkii ay uga baahdaan Degmada Dhexdeeda.
Waxay kaloo sheegeen in Ambulasta shaqaalaheeda si ay u helaan Mushahar ay u iibiyeen Bas kadhaxshaqeya Degmada Madiina Kaasoo Kutaal Calaamad Lagu aqoonsanyo inuu yahay kii ambalasta Masruufkeeda soosaarayay dadkane loosheegay inay raacaan baskaas si ay u helaan dad kashaqeeya caafimaadkooda.
waxay kaloo sheegeen inay Afur usameeyeen 80 Qoys , weliba ay ciidsiiyeen Caruurta Agoonta ee Madiino Degan.
Waxay kaloo sheegeen inay dib u bilaabeen Isbortiskii Magaalada Siloo helo dhalinyaro caafimaad qabta oo kafiyow dagaalada iyo Qabiilka.
Ugu dambayntii waxaa halkaas mar labaad lagu doortay Gudigii horey usooshaqeeyay iyadoo qaar kalne lagu kabay